ထိုင်ပေမြို့ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ငံသားသစ်သီးသန့်ကဏ္ဍမြန်မာဘာသာ-ပြင်းထန်သောအထူးကူးစက်ကပ်ရောဂါအဆုတ်ရောင် (COVID-19 အတိုကောက်ဝူဟန့် အဆုတ်ရောင်) ဇုန်-ထိုင်ပေမြို့အားကစားပြိုင်ပွဲ/အားကစားလှုပ်ရှားမှုများ/ရေကူးကန်လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်
သန်းခေါင်စာရင်း ဥပဒေ နှင့် မှတ်ပုံတင် ကဏ္ဍ
ပြင်းထန်သောအထူးကူးစက်ကပ်ရောဂါအဆုတ်ရောင် (COVID-19 အတိုကောက်ဝူဟန့် အဆုတ်ရောင်) ဇုန်
ထိုင်ပေမြို့ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ငံသားသစ် လူ့အဖွဲ့အစည်းစောင့်ရှောက်မှုဌာန
ဝန်ဆောင်မှု ထိုင်ပေအရသာကောင်း ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ငံသား
ထိုင်ပေလူနေမှုဘဝ so easy! အမှိုက်အမျိုးအစားသေချာခွဲ easy!
အကြံပြုရန် Hello Taipei
ထိုင်ပေမြို့အားကစားပြိုင်ပွဲ/အားကစားလှုပ်ရှားမှုများ/ရေကူးကန်လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်
1. ထိုင်ပေမြို့အားကစားပြိုင်ပွဲများလက်ခံကျင်းပရန်လမ်းညွှန်ချက်များ
(1) လက်ရွေးစင်ယှဉ်ပြိုင်သူများသည်ကျန်းမာရေးလက်မှတ်(၃ခုမှ၁ခု)ကိုရွေးပါ：ရှင်းကွမ်း ကာကွယ်ဆေး ပထမဆုံးဆေးထိုး14ရက်အတည်ပြုထားသော ပြန်လည်နာလန်ထူ လက်မှတ်/ခွဲခြားစာရင်း၊ 7ရက်အတွင်းအိမ်အမြန်စစ်ဆေးခြင်း/PCR အနုတ်လလက္ခဏာ
*ပြိုင်ပွဲကာလအတွင်းမတ်စ်ခ်မတပ်လျှင်ရသည်(ကစားခြင်းမပြုမီ/ပြီးနောက်တစ်ချိန်လုံး တပ်ရမည်)
(3)လျှောက်လွှာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း：ကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအစီအစဉ်နှင့်စစ်ဆေးမှု စာရင်း(ကျန်းမာရေးစစ်တမ်းအပါအဝင်)ကို3ရက်မတိုင်မီအတည်ပြုချက်ရယူရန်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်သို့တင်ပြပါ။
2. ထိုင်ပေမြို့အားကစားလှုပ်ရှားမှုများကိုပြန်ဖွင့်ရန်လမ်းညွှန်ချက်များ
(1) 8/24မှစတင်အသစ်ဖွင့်လှစ်သောစီမံကိန်းသစ်များ：ဟော်ကီ၊ကျွမ်းဘား၊ခြင်းလုံး၊ လမ်းပေါ်အက၊အလေးမ
(2) ဖွင့်လှစ်ခဲ့သောစီမံကိန်းများ：ပြေးခုန်ပစ်၊အေရိုးဗစ်၊ယောဂ၊ရစ်သမ်၊ထိုက်ကျီချွမ်၊ချိကုန်း၊ ကြံ့ခိုင်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း၊လေးမြှားပစ်ခြင်း၊ကျောက်တောင်တက်ခြင်း၊ကျောက်နံရံ၊ဓားသိုင်းအတတ်၊ဂျပန်ရိုးရာဓားသိုင်း၊လိုင်းစကိတ်စီးခြင်း၊အစွန်းရောက်စက်ဘီးစီးခြင်း၊စကိတ်လျှော ပြား၊စကိတ်စီးခြင်း၊ရေခဲပြင်လျှောစီးခြင်း၊ရေခဲပြင်ဟော်ကီ၊ဘေ့စ်ဘော၊ဆော့ဖ်ဘော၊ခရစ်ကက်၊ခရိုကေကစားနည်း၊ဂေါက်၊တင်းနစ်၊ကြက်တောင်၊ဘိလိယက်၊စကွပ်ဘောလုံး၊ ဘိုးလင်း၊ဘိလိယက်၊ပစ်ကယ်ဘော၊ဘောလုံး၊ရေလွှာလျှောစီး၊ရွက်လှေငယ်၊လှေလှော်၊ ကနူးလှေ၊ရေကူး၊မတ်တပ်လှော်တက်(SUP)၊ဖားကူး၊ရေငုပ်ခြင်း၊ဒိုင်ဗင်ထိုးခြင်း၊ရေအသက်ကယ်၊ရေအေရိုးဗစ်ကစားခြင်း၊ရေကြံ့ခိုင်ရေး၊နဂါးလှေ၊ယွမ်ဂျီအက၊လိုင်းအက၊တောလမ်း ခြေကျင်လျှောက်ပွဲ၊ကြံ့ခိုင်ရေး၊သစ်သားဘောလုံး၊ဘောလုံးလိမ့်(ဘိုးလင်း)
*လူမှုဆက်ဆံရေးအကွာအဝေးကိုအနည်းဆုံး 1.5 မီတာထားပါ။
* လူစီးဆင်းမှုစီမံခန့်ခွဲမှု：2.25 စတုရန်းမီတာလျှင်လူ 1 ဦးထက်မပိုပါ၊အတွင်းခန်းတစ်ခု တည်း၌လူ50ထက်မပိုပါနှင့်၊အပြင်ဘက်တစ်ခုတည်းတွင်လူ100ထက်မပိုရပါ။
3. ထိုင်ပေမြို့ရေကူးကန်လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များ
*ရေကူးကန်ရှိလူဦးရေသည်10 စတုရန်းမီတာလျှင်လူ 1 ဦးသာအများဆုံးဖြစ်သည်、
*ရေကူးကန်၏ pH တန်ဖိုးကို 7.2-7.8ကြားတွင်ထိန်းသိမ်းထားသင့်ပြီးကလိုရင်းကို 1.0-1.5ppm အတွင်းထိန်းထားသင့်သည်။
*ရေပေါ်ဘုတ်ပြား/ရေကူးကိရိယာ/ဆံပင်လေမှုတ်စက်တို့ကိုသန့်စင်ပြီးနောက်မှ နောက် တစ်ဦးကသုံးနိုင်သည်။
(2) တားမြစ်ထားသောအရာများ：အထောက်အကူပစ္စည်းများမဖွင့်ပါ(ရေချိုးခန်း/ချွေးထုတ်ခန်း/အကင်စက်/ရေနွေးငွေ့ခန်း/ ရေပူစမ်းကန်/ဂိမ်းရေကူးကန်စသည်တို့)
(3) သတိပြုရန်ကိစ္စရပ်များ：
ကွယျတဈပှငျ့ ကွယျ ၂ ပှငျ့ ကွယျသုံးပှငျ့ ကွယျ ၄ ပှငျ့ ကွယျ ၅ ပှငျ့
သတငျးအခကျြအလကျ update ကို：2021-09-01 14:13
အချက်အလက်ထိန်းသိမ်း：Household Registration Offices, Taipei City
ဌာနတည်နေရာ။ ၁၁ဝဝ၈ ထိုင်ပေမြို့ ရှင့်ယိရပ်ကွက် စိဖူလမ်း အမှတ်(၁) ဗဟိုရပ်ကွက် အဌမထပ်
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်နံပတ်။ မြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန 1999-6260 ဝင်ငွေနည်းသူများအပေ1999-1981 ပညာရေးဦးစီးဌာန1999-1216 ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန အိမ်ထောင်စပြုချိန1999-7118 အလုပ်သမားရေးရာဦးစီးဌာန-7038်
ှုန၄.ဝ ထက်အဆင့်မြင့်သော မြသတျနမ ဖြင့် 800x600 ဖြစ်သော မနျသူကအငသည ဖြင့်ဖတ်ရှုရန်အကြံပြုပါသည် ဃဥဏွံွှျု့ ၂ဝ၁၂ ထိုင်ပေမြို့အစိုးရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဌာနဗွှူျူျွုံနှနျွဠနီ